Eoropa Afovoany & Atsinanana · Aogositra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Aogositra, 2017
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Aogositra, 2017
Makedonia 31 Aogositra 2017
Eoropa Andrefana 18 Aogositra 2017
Afganistana 17 Aogositra 2017
Afghan Reality mandrisika ireo tafika vahiny tahaka ny miaramila Kanadiana mba hijanona ao Afghanistan. Hoy ilay bilaogera:
Okraina 09 Aogositra 2017
Azia Afovoany sy Kaokazy 09 Aogositra 2017
Albania: Voasoratra Ho Vakoka Manerantany Vaovao an'i UNESCO i Berat
Albania 08 Aogositra 2017
Natao tamin'ity taona ity tany Québec, Canada, tamin'ny 2 ka hatramin'ny 10 Jolay ny fivorian'ny Komitin'ny Vakoka Manerantany UNESCO fanao isan-taona. Toerana vaovao miisa 27 no nosoratana ho Vakoka Manerantany, izay miisa 878 ankehitriny. Araka ny bilaogy Stepping Stones, tafiditra ao amin'io lisitra io ny tanàndehiben'i Berat, any Albania.
Makedonia: Tsy Misy Mpanao Gazety Any Am-ponja Intsony, 15 Volana Aty Aoriana, Afaka i Zoran Božinovski Rehefa Nandoa Onitra
Hongria 04 Aogositra 2017
Taorian'ny nandaniany efa ho taona telo tany am-ponja tany Serbia sy Makedonia, nafahana tamin'ny 15 Jolay teo ilay mpanao gazety Zoran Božinovski.
Wikipedia Bolgara Manambara Ireo Fampidirana Nasionaly Tamin'ilay Fifaninanana Sary ‘Tia ny Tany ny Wiki ’
Bolgaria 04 Aogositra 2017
Nambaran'ny Wikipedia ireo sary 10 voalohany hisolo tena ny firenena amin'ilay fifaninanana iraisampirenena maka sary ireo toerana natoraly arovana, "Tia ny Tany ny Wiki ."
Romania 03 Aogositra 2017
Nanao Fifaninanana Vehivavy Manao Takokenatra Fitondra Milomano Ny Toby Nokleary Tseky (Czech) Mba Hifidianany Izay Ho Mpianatr'asa Manaraka
Repoblika Tseky 02 Aogositra 2017
Vetivety dia natrika fiampangana ho feno fanavakavahana ara-pananahana ilay hetsika: "Toa mananihany koa izany! Nampanaovina akanjo takokenatra fitondra milomano ve ireo lehilahy mba ho lasa mpianatr'asa?"